Fiaramanidina vy tsy misy fangarony ary mpamokatra Handrails | Jiannuo
Mpanamboatra ny vokatra vita amin'ny vy vy
Hifampitara-bokatra sy mifarana Cap
Ny hazakazaka hikarakara varavarana
Hardware efitra fandroana
Jiannuo Hardware dia hahazo ny fahazoana ny mpanjifa sy ny fankasitrahana amin'ny kalitao tsara
Orinasa matihanina iray mampifandray ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famolavolana, ny famokarana, ny fivarotana ary ny serivisy ara-ingineire, ny tsanganana, ny trano fandroana, ny trano fandroana, ny fitantanana ny varavarana, ary ny hardware , ny vy vita amin'ny takelaka ary ny vokatra hafa.
Marina One, antsoina hoe "HEVITRA LOHATENY" na "HEVITRA MANGALATRA", efamira fananganana avo mifangaro, mifangaro mifangaro ao am-pon'ny distrikan'i Bay Bay vaovao any Singapore, dia mameno ny vinan'ny Urban Redevelopment Authority (URA) amin'ny fanaovana an'i Singapore ho "City in a Garden", dia lasa tranobain-trano vaovao any Singapore avy eo vita. Amin'ny maha-mpanamboatra manam-pahaizana manokana ny sehatry ny hardware, Foshan Jiannuo Hardware Co., Ltd dia nomena voninahitra lehibe tamin'ny fandraisany anjara tamin'ity tetikasa ity tamin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny mpanjifa any Singapore. JN no tompon'andraikitra voalohany amin'ny ampahany tsy misy vy: ny rafitry ny vy tsy misy vy, ny vy matevina ary ny kojakoja, ny vy tsy azo itokisana, ny rindrina stainless vy, ny vy vita amin'ny haingo vita amin'ny vy sy ny vatan-drindrina, ny vy vita amin'ny vy, ny vy tsy misy vy , ny fako mavesatra vy, ny vy tsy mihetsika, ny dobo filomanosana vy, sns.
Amerika Deck + Railing
Fihenan-tsasatra amerikana. omena endrika tsy mety loina sy ny asa tanana tsara tarehy. novokarin'ny orinasa lafo any ivelany. Raha afaka manome sary ianao dia afaka mamolavola sy mamolavola anao i Foshan Jiannuo Hardware Products Co., Ltd..
Fiantsonana seranam-piaramanidina Changi 4
Raha ny seranam-piaramanidina iraisampirenena fahafito be indrindra amin'izao tontolo izao, ny seranam-piaramanidina Changi dia seranam-piaramanidina sivily any Singapore ary asiana habakabaka lehibe any Azia. Ny seranam-piaramanidina Changi Airport Terminal 4 dia trano misy rihana roa sy 25 metatra ary misy rihana lehibe misy 225,000 metatra toradroa. Antenaina hampiakatra ny haben'ny mpandeha efa ho 82 tapitrisa isan-taona. Amin'ny maha-mpanamboatra manam-pahaizana manokana ny sehatry ny hardware, Foshan Jiannuo Hardware Co., Ltd dia nomena voninahitra lehibe tamin'ny fandraisany anjara tamin'ity tetikasa ity tamin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny mpanjifa any Singapore. JN no tompon'andraikitra voalohany amin'ny ampahany tsy misy vy: ny rafitry ny vy stainless, ny vy tsy misy vy miady amin'ny fifandonana, sns.
Iray amin'ireo toeram-pivarotana farany tao amin'ny lalana Orchard talohan'ny nidirany tao amin'ny Distrikan'ny Civic, Orchard Central no toerana fivarotana avo indrindra any Singapore izay misy endrika tsy manam-paharoa amin'ny arsitikanina toy ny endrika fitaratra sy ny mpanakanto eo an-toerana Matthew Ngui, sary mihetsika digital digital. Manana endri-javatra maro izy ireo izay mirehareha amin'ny fampidirana ny tsena voalohany amin'ny tanàna Mediteraneana, rindrina mitaingina avo indrindra eria ao Via Ferrata, rindrina avo indrindra any an-toerana, famoriam-bola lehibe indrindra ataon'ireo mpanakanto iraisampirenena miharihary, lakolosy ro / 24-7 miasa sy Roof Garden ary Discovery Walk. Amin'ny maha-mpanamboatra manam-pahaizana manokana ny sehatry ny hardware, Foshan Jiannuo Hardware Co., Ltd dia nomena voninahitra lehibe tamin'ny fandraisany anjara tamin'ity tetikasa ity tamin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny mpanjifa any Singapore. JN no tompon'andraikitra voalohany amin'ny ampahany tsy misy vy: ny rafitry ny vy vy, sns.
Jiannuo Hardware dia namorona hery ara-teknika mahery vaika notarihin'ny injeniera zokiolona, ​​mpamorona ary mpiasan'ny teknika matihanina. Nampiditra fitaovana famokarana avy any ivelany izy ireo, ary ny vokatra dia vokarina mifanaraka amin'ny dingana ara-teknolojia manara-penitra.
Mikendry ny hanome ny mpanjifa manana kalitao tsara, azo ampiharina, zava-mahadomelina, novelika ary endrika tsy manam-paharoa ary tsy misy fotaka an-tsokosoko sy stainless vy. Mandritra izany fotoana izany, ny Hardware Jiannuo dia mivoatra hatrany ny teknolojia vaovao, ny dingana vaovao, ary ny vokatra vaovao izay mety amin'ny hardinovana haingo maoderina mba hampifanaraka ny fampandrosoana.
Manomeza mpanjifa manana kalitao avo lenta sy azo ampiharina ary zavatra tsy manam-paharoa ary tsy manam-paharoa amin'ny lalamby vy sy tsy misy stainless. Mandritra izany fotoana izany, ny Hardware Jiannuo dia mivoatra hatrany ny teknolojia vaovao, ny dingana vaovao, ary ny vokatra vaovao izay mety amin'ny hardinovana haingo maoderina mba hampifanaraka ny fampandrosoana.
Jiannuo hardware dia hahazo fankasitrahana sy fankasitrahana bebe kokoa amin'ny kalitao tsara.
Mpanjifa voalohany, antoka ny kalitao, mamorona vokatra avo lenta avo lenta.
Jiannuo | Efitra fitehirizam-borona amin'ny efitrano fandraisam-bahiny Knob JN-BS01 Mpanamboatra
Jn-BS015Knb varavarana fitaratraFitaovana lehibe: 304 3116 Stainless vy
Ny efitrano fandroana kalitao Hardware JN-BS023 manufacturer | Jiannuo
Ny trano fandroana Hardware JN-BS023 raha oharina amin'ny vokatra mitovy eny an-tsena, dia tsy manam-pahalalana miavaka amin'ny lafiny fampisehoana, kalitao, endrika tsara tarehy amin'ny tsena.JInnuo dia mamintina ny lesoka amin'ny vokatra taloha, ary manatsara hatrany azy ireo. Ny fanondroana ny hardware Hardware JN-BS023 dia azo amboarina araka ny zavatra ilainao.visyFitaovana lehibe: 304 3116 Stainless vy
Orinasa Balustrade Top Hardware - Jiannuo
Jn-A067Balustrade TopBalustrade top hollware raha ampitahaina amin'ny vokatra mitovy amin'ny tsena, dia misy tombony tsy manam-paharoa amin'ny lafiny fampisehoana, kalitao, endrika, sns, ary mankafy ny hamintina tsara amin'ny tsena. Ny mombamomba ny harddrde topware dia azo amboarina araka ny zavatra ilainao.Fitaovana lehibe: 304, 316 stainless vy
Mpanamboatra mpanamboatra balustrade topedware namboarina avy any Chine | Jiannuo balustrade ambony
Balustrade top hollware raha ampitahaina amin'ny vokatra mitovy amin'ny tsena, dia misy tombony tsy manam-paharoa amin'ny lafiny fampisehoana, kalitao, endrika, sns, ary mankafy ny hamintina tsara amin'ny tsena. Ny mombamomba ny harddrde topware dia azo amboarina araka ny zavatra ilainao.Jn-A074Balustrade TopFitaovana lehibe: 304, 316 stainless vy42.4, 50.8
Amin'izao fotoana izao, i Jiannuo dia nanorina varotra hentitra sy aorian'ny serivisy Serivisy ary nanangana sary orinasa tsara, izay nankasitraka sy nankasitraka ny mpanjifanay.
Mino izahay fa eo ambanin'ny foto-kevitry ny serivisy momba ny "Customer Voalohany, ny kalitao voalohany", Jiannuo Hardware dia ho ekena ary hankasitraka ireo mpanjifa bebe kokoa ao an-trano sy any ivelany, ary hitohy hatrany sy hatanjaka ary hatanjaka hatrany. Ny vokatra lehibe ataontsika dia ny stainless vy sy ny hakatra.
Lazao anay fotsiny ny zavatra takinao, afaka manao mihoatra noho izay azonao eritreretina ianao.